विज्ञान र प्रकृतिलाई नै चुनौती दिने गरी जन्मियो अचम्मको बच्चा – Namaste Host
April 9, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on विज्ञान र प्रकृतिलाई नै चुनौती दिने गरी जन्मियो अचम्मको बच्चा
एजेन्सी । प्रकृतिलाई नै चुनौती दिँदै संसारमा फेरी एक जना बच्चाको जन्म भएको छ । इराकमा जन्मिएका एउटा बच्चाको तीनवटा लि ङ्ग छ । यो संसारमै भएको पहिलो घटना हो । उनको जन्म पछि चिकित्सक पनि छक्क परेका छन् । विज्ञान र प्रकृतिलाई नै चुनौती दिने गरी जन्मिएका ति बच्चाको जन्मले चिकित्सा विज्ञान तथा विज्ञलाई पनि छक्क बनाएको छ ।
यस्तो कसरी भयो ? के कारणले ति बच्चा तिन वटा लिं ग लिएर जन्मिए भन्ने कुराको जवाफ बैज्ञानिक र चिकित्सकहरुसंग छैन । बैज्ञानिक र चिकित्सकले यस अवस्थालाई ुसुपरन्युमरेरी पेनिसु भनेका छन् ।
संसारमा अहिले सम्म यस्तो घटना भएको थिएन । अहिलेसम्म संसारभरमा एकसय द्वीलि’ङ्गी मात्र फेला परेका छन् । यस्तो घटना पहिलो पटक भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
यसलाई हालसम्म संसारकै पहिलो तथा दुर्लभ घटना भन्दै विश्वभर चर्चा भएको छ । द्वीलिगी बच्चाको जन्मका कारण पनि अहिले सम्म पत्ता नलागेको बेलामा अहिलेको यो घटनाले थप आश्चर्य गराएको छ । अहिलेको यो जन्मिएको त्रिलि’ङ्गी बच्चाले वैज्ञानिकका अगाडि ग म्भिर तथा नयाँ चुनौती खडा गरिदिएका छन् ।
इराकको मोसुल शहर नजिकै दोहुकमा जन्मिएको यस बच्चाका दुइवटा लि’ ङ्ग शलयक्रिया गरी फालिएका छन् । विज्ञका अनुसार ६० लाख बच्चामध्ये एक बच्चा एकभन्दा बढी लि ‘ङ्गका साथ जन्मिन सक्ने अनुमान गरिएको भए पनि अहिले सम्म यस्तो घटना भएको थिएन ।
यो घटनाको पछाडिको कारण स्पष्ट नभए पनि न शा लु प’दा’र्थको सेवन यसको कारण हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक स ङ् क्र म ण का कारण पनि यस्तो हुनसक्छ । रिपोर्ट जेनेटिक संरचनामा हुने परिवर्तनका कारण पनि यस्तो हुनसक्ने बताइएको छ ।
आखिर यी छोरा ले के गरे ? आमाले भनिन :‘यस्तो छोरालाई जन्म दिने भगवानको पनि आँखा अ न्धो हुनुपर्छ, ‘भगवानले यस्तालाई जन्म दिन भन्दा ग र्भ मै तु हि यो स् र कसैलाई यस्तो छोरा नदिउन्’ (भिडियो)
जब आफ्नै ससुराले बुहारीलाई खु’कु’री देखाउदै नि’र्बस्त्र…..(भिडियो)